प्रेमीलाई एक लाख म्यासेज पठाएर किड्नी खाने चाहाना प्रकट गरेपछि..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रेमीलाई एक लाख म्यासेज पठाएर किड्नी खाने चाहाना प्रकट गरेपछि...
एजेन्सी। संसारमा विचित्र किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । यहाँ सबैको आ–आफ्नो चाहाना हुन्छ । यस्ता चाहानाहरुकै कारण अनेक किसिमका अचम्मका घटनाहरु हुनेगरेका छन् । जसले बेलाबेलामा एक चोटी सोचमग्न पारिदिन्छ ।
यस्तै एउटा घटना अमेरिकामा घटेको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यकी एक युवतिले आफ्ना प्रेमीलाई मारे रगत खाने चाहाना राखेकी छिन् । यस्तो चाहाना राख्ने युवति हुन् ज्याकलिन एडिस । एक डेटिङ साइटमा ज्याकलिनको भेट भयो छालाको हेरचाह गर्ने कम्पनीका सिइओसँग ।
तर, यहाँ कुरा अचम्मको भयो । उनीहरुको डेटमा पुरुषले सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेनन् । अर्थात उनलाई ‘इग्नोर’ महसुस भयो । यसपछि के चाहियो र । ज्याकलिनले दैनिक ५ सय एसएमएस पठाउन थालिन् ती पुरुषलाई ।
यति मात्र होइन, ज्याकलिनले ती पुरुषलाई लगातार फलो गरिरहिन् ।
एकपटक त ज्याकलिनले आफ्नो निबासमा पतिको नाम भनेर तिनै डेटमा गएका पुरुषको नाम पनि लेखिन् । जम्मा एकपटक डेटमा गएपछि रुची नबढेर बेवास्ता गरेकै कारण १ लाख ३९ हजार एसएमएस र पढ्नै नसकिने सन्देशपछि पीडित पुरुषले प्रहरीमा उजुरी गरे ।
उजुरीपछि ज्याकलिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।